Yonke intombazana ifuna ukungabi nantloni, ubuhle obuhle kunye nokulwa nezigidi zabantu. Akukho nto ilukhuni kule nto, faka nje izinto ezimbalwa ezifihlakeleyo kwikhwama lakho lezonyakatho. Ubuhle bokomoya nobungqina bentombazana buya kusindisa ihlabathi, kwaye sele sibonile!
Ubomi nawuphi na intombazana ugcwele izinto ezinzima. Ukuze sihlale sihle, silandele iingcebiso zethu.
Thatha uhlaziyo kunye nawe
Uqala phi usuku lwakho olutsha? Ngokwemvelo ngokuzivala ukukhanya nokutsha ngenxa yobushushu bokusa, ubisi lomzimba, iphunga elifihlakeleyo lempepho yakho oyintandokazi. Ukwandisa le mvakalelo kuya kunceda imihla ngemihla ukuthungwa kwethenda ngokungavamile kunye nephunga elimnandi. Uyilo lobumba lujika lube yintengiso yefashoni. Oku kuya kuba yinombolo 1 kwisikhwama sakho sezonyusa. Ukongeza, faka i-spray ngamanzi ashushu, okuya kubangela ukutshabalalisa kwesikhumba ebusweni.
Xa ujabule inkomishi yekhofi okanye itiye eluhlaza, unyanzela ukuba wenze i-makeup, ngoko umgca wezinwele. Ukucinga kwakho kwisibuko kunye nokumemeza "Ndikulungele ukunqoba ihlabathi lonke!". Ukuba uvakalelo lwangenakukushiya yonke imini, faka kwisikhwama sezonyakatho isisombululo semfihlo sesi-2 - i-napkins ngokubhekisele ebusweni. Bakususa lula amafutha amaninzi elukhumbeni, ngaphandle kokuhlamba i-makeup! Musa ukulibala malunga neendlela ozithandayo: i-powder, i-mascara, i-lipstick ne-lip gloss.
Enye yezona nkcukacha ezicacileyo ngokubonakala kwakho yizinwele nezinwele. Enyanisweni kwaziwa ngexesha elide, ezo iinwele ziyona nto ebaluleke kakhulu kwimoya kwintombazana, emva kokuba zonke iinwele zibhekiselele kumnini wayo. Ukugqithiseleka ngakumbi kunye neenwele ngokukhawuleza, ukuthandana, ukungabonakali kunye nomnini wabo. Unamandla ngakumbi kugxininisa kwiinwele ezide, ezizintlu, ubuninzi obunempilo kunye nobungqingili obubukekayo. Loo mfanekiso uza kubangela ukujonga ngokugqithiseleyo kwizesondo ezinamandla. Kodwa kukho ukuphazamiseka kwimali. Kulo vavanyo kwiziko okanye ngodliwano-ndlebe e-ofisini, unokuphathwa ngononophelo. Isixhobo senombolo 3 - iingubo zokugqoka izambatho ziya kunceda. Ukukhanya okungabonakaliyo kunye noboya bezinwele kuya kukuguqulela ibe yintombazana yebhizinisi, kunye ne-hairpin eneenkwenkwezi ezichasene nayo iya kugxininisa ubufazi bakho kwaye ibe yinto yokufumana imfuneko yokuya kwiqela. Yilungele utshintsho.
Njengoko uyazi, ubuhle beentombazana zonke zingaphakathi, kungekhona ngaphandle. Ukuba ukhanyisa kwivalelo yolonwabo lwendalo yonke, phila ngokuvisisana nawe kunye nokumomotheka kwimihla ngemihla, ngoko ukhangeleka ujonge ngexesha elifanayo. Ukuxhaswa kweli lizwe, uya kuncedwa yindlela inombolo 4 - ityhokoleji encinci kwipokethi efihliweyo yesikhwama sakho sokonkcenkceshela. Kuye kwaziwa ixesha elide ukuba kuyo yonke intleko ye-chocolate into encinci yolonwabo ifihlakele ubuhle bokomoya kunye nomzimba wentombazana.
Nangona usuku lwakho lubonwe ngcaciso emfutshane, ungabandakanyi ithuba lokuba usebenzise isidlo sakusihlwa kwivenkile yokutyela okanye ukumenywa kwiqela. Kuloo nto inokumangalisa into enokumangalisa ngayo enye yebalandeli, ibethwe buhle bakho. Yilungele ukuphazamiseka kwexesha elizayo kuya kunceda ithetha inombolo yesi-5 - ipalayini enezithunzi zemibala epheleleyo. I-Violet, i-brown, i-bronze okanye i-beige shades kunye ne-blush kunye ne-eyeliner kalula iguqula i-daily makeup kuze kuhlwe. Yenza izithunzi phezu kwentsasa kwaye ugxininise umgca wekhosidi kunye ne pensile. Ungakulibali ukufaka isikhwama sokumonkcoza isiponji kunye neengqungquthela zokusasaza. Lungiselela umhla kwaye uzive utshalileyo uza kunceda imihla ngemihla. Ukuzihlaziya kunye nokwenza kwakho, wena ngokwakho awuyi kukholwa ukuba uchithe usuku lonke kwiziko okanye emsebenzini. Yiba nethemba, umomotheka kumhla omtsha, kwaye ukubonakala okucacileyo kuqinisekisiwe kuwe. Ngaphandle kokungathandabuzeki, ubomi buba buhle kakhulu intombazana enhle.
Izicwangciso ezili-10 eziphezulu zobuhle kunye nesitayela ezivela kwi-Hollywood stylist
Indlela yokwandisa isifuba nge 100% ngaphandle kokuhlinzwa?
Iifom epheleleyo + isikhumba esikhathekayo
Imigaqo yokuziphatha kwentombazana ngokumalunga nomfana
Fortune uxela amantombazana ephepheni
I-paraffinotherapy kubanda ekhaya
Izifo zesityalo sangaphakathi saseKalchocho
Izifo zintsana: ukuxhatshazwa kokuzalwa
IHoroscope ngo-2015 kwiNtombikazi
I-Tart nama-blackberries kunye ne-pistachios
Iidyiphule zokunyanga ukuxhomekeka kotywala
Izitya zesizwe zesizwe zaseBelarus